ငရုတ်သီးကို Re-export သီးနှံအဖြစ် ကုန်သွယ်ခွင့် ပေးထားသော်လည်း ပြန်လည် တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိသေ?? - Yangon Media Group
ငရုတ်သီးကို Re-export သီးနှံအဖြစ် ကုန်သွယ်ခွင့် ပေးထားသော်လည်း ပြန်လည် တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိသေ??
ငရုတ်ကို ပြန်လည်တင်ပို့ကုန် Re- export သီးနှံအဖြစ် ကုန်သွယ်ခွင့်ပေးထား သော်လည်း လက်ရှိအချိန်အထိ ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်း စီးပွားရေးနှင့်ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှသိရသည်။ စီးပွားကူးသန်းဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ထောက်အတွင်းဝန် ဦးခင်မောင်လွင်က ”ဝန်ကြီးဌာန ကနေ ကုန်စည်အမယ်တွေ ခွင့်ပြုခဲ့ရာမှာ ငရုတ်သီးဆိုရင်လဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးသီးနှံမယ်ထဲ ပါဝင်တယ်။ ငရုတ်ကို Re- export နဲ့ ပို့ဖို့ခွင့်ပြုထားပေမယ့် ငရုတ်အသင်းဘက်က မလုပ်နိုင်သေးဘူး”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်စဉ် ငရုတ်စိုက်ဧက လေးသိန်းမှ တန်ချိန် ၁ဝ သိန်းကျော်(အနည်း ဆုံး)ထွက်ရှိပြီး ပြည်တွင်းသုံးစွဲမှု မြင့်တက် နေသောကြောင့် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံများသို့သာ အနည်းငယ်တင်ပို့နိုင်သေးကြောင်းသိရသည်။ ” Re- export တင်ပို့ဖို့က အသင်းအနေနဲ့ တစ်ဖက်နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ တရုတ်နဲ့ ထိုင်းဘက်ကို ညှိနေတုန်းပါ။ သူတို့ဘက်ကလဲ လိုအပ်ချက်အပေါ် ဝယ်ယူမှာပေါ့။ ငရုတ်သီးမှုန့် ကုန်ကြမ်းအတွက်ကတော့ သက်ဆိုင်ရာဝန် ကြီးဌာနတွေနဲ့ အသင်းအဖွဲ့တွေက ငရုတ်စိုက်တောင်သူတွေကို အသိပညာပေးလုပ်ငန်း တွေ လုပ်ဆောင်သွားပါမယ်”ဟု ငရုတ်သီး မှုန့်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း(ယာယီ) ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇာနည်အောင်က ပြောသည်။
လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်း ရောင်းချနေသည့် ငရုတ်သီးများမှာ ပြည်တွင်းထွက်ဖြစ် သော်လည်း ငရုတ်သီးမှုန့်အမျိုးမျိုးတွင် တွေ့ ရသည့် Aflatoxin အဆိပ်မှိုသည် ပြည်တွင်းထွက်ကုန်ကြမ်းတွင် ပါဝင်သည်ဟု လုပ်ငန်းရှင်အများစုက သုံးသပ်သည့်အတွက် အိန္ဒိယဘက်မှ ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူထုတ်လုပ်နေရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ငရုတ်သီးမှုန့်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ သိရသည်။
ငရုတ်စိုက်တောင်သူများအနေဖြင့်မူ ငရုတ်သီးဈေးနှုန်းများ ကျဆင်းသည့်ဒဏ်ကို သုံးနှစ်ဆက်တိုက်ခံစားလာရသည့်အတွက် အရှုံးပေါ်လျက်ရှိကာ ပြည်ပဈေးကွက်ကို ဈေးကွက်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် တင်ပို့နိုင်ရန် မျှော်လင့်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ”ငရုတ်စိုက်စရိတ်က ဆေးဖျန်း၊ ပေါင်းသတ်ပေးရတာရယ်၊ လူငှားစရိတ်ကြီးတာရယ် ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြင့်တဲ့သီးနှံပါ။ ငရုတ် ပေါ်ချိန်ဆို အမြတ်ရဖို့ထက် အရင်းကျေအောင် ဆုတောင်းနေရတယ်။ ရာသီအလိုက် စိုက်ရ တာဆိုတော့ မြေကွက်လပ်ထားရမှာနဲ့အတူတူ ပြန်စိုက်လိုက်ရတာပေါ့”ဟု နေပြည်တော် တပ်ကုန်းမြို့နယ် ငရုတ်စိုက်တောင်သူ ဦးကြီး မြင့်က ပြောသည်။ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်က ငရုတ်အခြောက် တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၁၅ဝဝဝ ကျော်ဈေးရရှိခဲ့ပြီး လက်ရှိ ငရုတ်ခြောက်အရှည်သီး တစ်ပိဿာကျပ် ၅ဝဝဝ၊ မိုးမျှော်သီး ကျပ် ၆ဝဝဝ၊ ကျောက် စိမ်းသီးအစို ကျပ် ၉ဝဝ၊ ငရုတ်ခြောက်ပွ တစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၇ဝဝဝ ကျော် ဈေးပေါက် ကြောင်းသိရသည်။